Umbukiso wokuhweba ngo-2021
Umbukiso Wokuhweba Wokungenisa Nokuthekelisa Wangaphandle wase-2021 ububanjelwe eDolobheni laseShijiazhuang, esifundazweni saseHebei, eChina. Inkampani yethu ithole ivolumu enkulu yokuthengisa edokodweni elingu-22, futhi yabamba iqhaza emisebenzini ekhethekile yokuthengisa nasekukhuthazeni egumbini lokusakaza. Imikhiqizo yethu inconywe kakhulu yiwo wonke umuntu.
Ukuthengiswa kommbila kubukeka kunenzuzo
Ukuthi "izinto zehlukile" ngo-2020 ukusho okusobala ngomthelela we-COVID-19 cishe kuyo yonke into. Kepha kungahle kube nekhoneni elilodwa lemakethe yezinhlamvu lapho i-cliché ishubile kakhulu, futhi lokho kungathinta isinqumo sakho sokugcina ummbila njengoba isivuno siqala ukwehla ekhaya ...
Umshini Wokumboza Umshini Wezimbewu
Umshini Wokumboza Imbewu, Umshini Wokwelashwa wenziwa ngokususelwa enhlanganisweni yethiyori nokwenza. Ukucaciswa komkhiqizo: Ukukhiqizwa okuphezulu: 5000kg / ihora (0-5000kg) Amandla asekelayo: 1.5kw amandla we-motor booster: Ukusetshenziswa kwamandla ka-120W Ubuningi: 1.6 degrees / ihora Ukuphakamisa ukuphakama: 90 cm Isisindo: 170 ...
4.3m Gabion netting umshini / Hexagonal wire anezikhala umshini / Hot ukudayiswa gabion ukwenza umshini e China incazelo
I-gabion yethu ibhokisi elingunxande elenziwe ngocingo elenziwe ngocingo olunezinhlangothi ezimbili ezisontekile kanye ne-weldmesh yensimbi yensimbi, ngokungeziwe ngokuqiniswa ngocingo olusindayo olusebenza emaphethelweni nangamadayaphrinta ahambisanayo. Lawa mabhokisi anezikhala alethwa kusayithi ligcwele phama, lapho ahlangane khona ...
Izinkukhu zokucubungula ubuchwepheshe: Izinkukhu ezihlanganisiwe | 2020-08-31
Enye yezindlela eziyinhloko izinqubo zokucubungula izinkukhu zengeza inani kunoma yimuphi umkhiqizo isinkwa. Izizathu ezimbili ezinkulu kakhulu lapho amaprosesa afaka izinkwa zezinkukhu ukukhulisa noma ukwengeza ukunambitheka nokuthungwa. "Ngikholwa ukuthi kunezinhlelo ezimbili eziyinhloko zokudla izinkomo embonini yezinkukhu, amafulethi nezicelo zasekhaya," kusho ...
Umshini wokukhetha imbewu yekhasimende laseDubai ukulungele ukulethwa
Umshini wokukhetha imbewu yekhasimende laseDubai ukulungele ukulethwa, ngiyabonga ngokuxhaswa nokuhlonishwa kwakho.
I-DW200-2000 Heavy Duty Ring Nokwelukiweyo Cindezela I-Felt Loom
Lokhu kusebenza ukweluka amandla amakhulu wephepha okwenza umshini wokuluka uzizwe nge-selvage yangempela, ikakhulukazi ocingweni lokwelukiweyo okuzwakele.
I-oda lase-Uganda lase-2020 lase-Uganda
Ngibonga amakhasimende ase-Uganda ngokuthenga ama-5XZFHS-25 okuhlanza imbewu.
Ububanzi bohlelo lokusebenza kanye nobuhle be-gravity concentrator ethile
Iqoqo elithile lamandla adonsela phansi lilula, kulula ukufaka esikhundleni sezikrini ezahlukahlukene zemeshi. Ingasetshenziswa nge-conveyer. Ububanzi obusetshenziswayo: Ingasetshenziswa ngokushintsha indawo yesikrini yokucaciswa okuhlukile nobubunjwa: 1. inokuhlukahluka kwamandla adonsela phansi okwehlukana kwazo zonke izinhlobo zomlingani oyimbudumbudu ...
Isimiso esisebenzayo somshini wokukhetha
Ungayikhetha kanjani imbewu? Uyini umgomo womshini wokukhetha? Yini ubukhulu obusebenzayo bomshini wokukhetha? Umshini wokuhlunga ususelwa kumgomo wokuthi izinhlayiya nobukhulu bokuhlukaniswa kwesimo kuzokwenzeka kwinqubo yokugcwala kwe-granular mater ...
Yiziphi izici zokuhambisa isikulufa
Iscrew conveyor inezici ezilandelayo: 1) Isakhiwo silula futhi izindleko ziphansi kakhulu. 2) Umsebenzi onokwethenjelwa, ukugcinwa okulula nokuphathwa .. 3) Usayizi ohlangene, usayizi wesigaba esinqamulelayo, unyawo oluncane. Esikhaleni sokungena nokuphuma, igumbi labasebenzi lehlisa kalula ...
IShijiazhuang Tefeng Trading Co., Ltd.